Wordpress 3.0 Features | Famolavolana tranonkala | Roundpeg
Asabotsy, Jona 12, 2010 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2015 Lorraine Ball
Tsy teknisiana amin'ny alàlan'ny fanazaran-tena na ny natiora aho, ka mitady fitaovana foana ahafahako milalao ao amin'ny vondrom-piarahamonina teknolojia. Roa taona sy tapany lasa izay, nahita WordPress aho, ary ho ahy dia mpanakalo lalao izany.
Ny fampiasana WordPress ho rafitra fitantanana atiny dia afaka mamolavola, mijery matihanina, tsotra hampiasa tranokala ho an'ireo mpanjifan'ny orinasa kely izahay. Ny lisitr'ireo plugins tsy mitsaha-mitombo dia namela anay hamorona tranokala matanjaka hatrany, miaraka amin'ireo fiasa azo oharina amin'ireo tranonkala namboarina natao azo jerena amin'ny isa avo indrindra. - Ka raha hametraka izany amin'ny fomba malefaka, dia mpankafy WordPress aho.
Isaky ny fanavaozam-baovao dia mihamaro hatrany ireo fiasa izay manamora ny asako sy manamora ny fiainan'ny mpanjifanay. Ary izao, WordPress 3.0 dia alefa ny alatsinainy izao. Hatraiza no ho faran'ity kinova vaovao ity? Ireo tatitra tany am-boalohany avy amin'ireo mpanapa-kevitra Beta dia manasongadina ireo fisehoan-javatra vaovao mahatalanjona:
Karazana paositra namboarina: Ao amin'ny kinova taloha ianao dia afaka mamorona lahatsoratra sy pejy, ankehitriny ianao dia afaka mamorona endrika fanampiny ho an'ny karazana fampahalalana manokana, fijoroana vavolombelona, ​​FAQ's, mombamomba ny mpanjifa na ny mpiasa, ny lisitry ny zavatra mety ho raha mbola ny karazana orinasa mety hampiasa azy io.
Lahatsoratra navoakan'ny mpanoratra: Ao amin'ny bilaogy mpanoratra marobe toa an'ity dia samy manana ny "fombany" ny mpanoratra tsirairay. Na dia tokony mbola mifehy ny endrika sy ny fahatsapana rehetra aza ny tompona tranokala mba hitazonana ny fahamendrehan'ny marika, izany dia tokony hamela ny toetra amam-panahy hivoatra. Tena faly aho momba ity fampiasa manokana ity ho an'ny Roundpeg bilaogy rehefa manomboka manoratra atiny bebe kokoa ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ekipako.
Menu Management: Ao amin'ny kinova taloha, ny manafatra pejy sy pejy kely dia tsy maintsy tantanana ao anatin'ny paositra tsirairay. Mora ny manampy pejy, fa ny mampiditra azy amin'ny toerana mety amin'ny fitetezana dia mety hanaintaina, indrindra raha manana pejy maro ianao. Manana iray lehibe
Widget Widget an'ny sidebar: Mampiasa lohahevitra fanaovan-gazety Studio matetika izahay noho io fisehoan-javatra io izay ahafahantsika mamorona footer manan-karena atiny izay miseho amin'ny pejy tsirairay. Faly aho fa mahita an'io tafiditra ao amin'ny 3.0 ho fenitra.
Toerana tokana manambatra sy Multisite: Na dia tsy miraharaha aza ny mpanjifako dia hanatsara be anay izany, rehefa manangona tranonkala maro kokoa izahay. Ny fifindrana amin'ny endrika MU dia ahafahantsika manavao plugins sy atiny indray mandeha, fa tsy miverimberina!
Betsaka ireo fiasa manaitaitra hafa amin'ity fanavaozana ity! Tsy andriko ny hanandrana azy rehetra. Te hahafantatra izay tianao indrindra aho rehefa manomboka miasa amin'ny kinova farany.
Tags: lahatsoratra navoakan'ny mpanoratrafitantanana meniomultisiteWordPressWordpress 3Wordpress 3.0
12 Jun 2010 amin'ny 10:03 AM
* DONT_KNOW * Mahaliana ny mahita hoe inona ny 'tsiro' an'ny MU ampiarahin'izy ireo. Ny multi-domain dia tsy singa fototra an'ny MU ary sarotra ampiharina (nanao fampiharana 14 izahay) ary ny sasany amin'ireo fiasa dia tsy nilamina (toy ny fametrahana plugins amin'ny tambajotra rehetra toa tsy mandeha intsony). Mampitandrina aho amin'ny fampiasana ny MU hampiantrano mpanjifa marobe amin'ny fotoana iray ihany, mitaky anao hamindra ny mpanjifa REHETRA raha sendra mila mifindra any amin'ny tontolon'ny mpizara haingana kokoa izy ireo, na te hampiantrano ny azy ireo amin'ny farany.